China Ukubaluleka kobushushu kunye nokufuma kwifama yenkukhu uMvelisi kunye noMthengisi | HENGKO
Sintered misindo Metal Amacebo okucoca
Stainless lokucoca ulwelo
Stainless Isihluzi Disc
Stainless Isihluzi Tube
Stainless Isihluzi Plate
Iindebe zetafile zeNtsimbi
Sinter Stainless lokucoca ulwelo
Sinter Powder Metal lokucoca ulwelo
Powder Sintered misindo Metal Isihluzi Material
Sintered Bronze lokucoca ulwelo
Stainless mesh lokucoca ulwelo
Ukunyibilikisa kwiMoya Muffler
UkuLungiswa kweDatha yokuFuma kweXesha
Dew Point woluvo Gazi
Ubushushu Ukufuma woluvo
Isidlulisi kunye neThummitter
Ukufuma woluvo Housing
Ilitye leMbonakalo yeCarbonus
Ilitye leCarbonation yeoksijini
I-Bubble Diffuser Air Stone
Indibano yeDilesi yegesi
Gas detector woluvo Housing
Gas woluvo Assembly Ihlole
INdibano yeDluliso yegesi
Ukuhluza i-Porous Metal
Isisombululo se-IOT yomswakama
Ukubaluleka kobushushu kunye nokufuma kwifama yenkukhu
Ubusika buyeza, emantla nasezantsi kungene ixesha elibandayo, ayingobantu kuphela abaye babanda, inkukhu iya "kubanda". Amaqondo obushushu yenye yezinto ezibalulekileyo ezinokuphucula izinga lokusinda kunye nokuqanduselwa kwenkukhu yenkukhu kwifama yenkukhu, sonke siyazi ukuba kuphela kwindawo efanelekileyo ubushushu amaqanda anokukhula kwaye ekugqibeleni aqandusele iinkukhu. Kwaye kwinkqubo yokukhulisa amantshontsho asezantsi, iqondo lobushushu liphantsi kakhulu, amantshontsho alula ukubanjwa kwaye abangele urhudo okanye izifo zokuphefumla, kwaye amantshontsho aqokelelene ndawonye ukuze afudumale, achaphazele ukutya kunye nemisebenzi. Ke ngoko, ifama yenkukhu kufuneka ithathele ingqalelo kulawulo lobushushu.
Ukubeka iliso kubushushu kunye nolawulo ehokweni yenkukhu:
Iqondo lobushushu kusuku lokuqala ukuya kolwesibini lobudala lwaluyi-35 ℃ ukuya kuma-34 ℃ kwisifukamisi kunye nama-25 ukuya kuma-24 ℃ kwifama yenkukhu.
Iqondo lobushushu le-incubators ukusuka kwi-3 ukuya kwi-7 yeentsuku zobudala yayiyi-34 ukuya kwi-31 ℃, kwaye yeefama zeenkukhu zazingama-24 ukuya kuma-22 ℃.
Kwiveki yesibini, iqondo lobushushu le-31 ℃ ~ 29 ℃, kwaye ubushushu kwifama yenkukhu yayingu-22 ℃ ~ 21 ℃.
Kwiveki yesithathu, lobushushu incubator kwaba 29 ℃ ~ 27 ℃, kwaye ubushushu yenkuku ifama 21 ℃ ~ 19 ℃.
Kwiveki yesine, ubushushu be-incubator ibingama-27 ℃ ~ 25 ℃, kwaye yefama yenkukhu ibiyi-19 ℃ ~ 18 ℃.
Ubushushu bokukhula kwamantshontsho kufuneka buhlale buzinzile, abunakuguquguquka ukusuka phezulu ukuya ezantsi, kuya kuchaphazela ukukhula kweenkukhu.
Ukufuma kwindlwana yenkukhu ubukhulu becala kuvela kumphunga wamanzi oveliswe kukuphefumla kwamantshontsho, impembelelo yokufuma komoya kumantshontsho kudityaniswe nobushushu. Kumaqondo obushushu afanelekileyo, ukufuma okuphezulu kunempembelelo encinci kulawulo olushushu lomzimba wenkukhu. Nangona kunjalo xa iqondo lobushushu liphezulu ngokwentelekiso, umzimba wenkukhu ubukhulu becala uxhomekeke ekuphelisweni kobushushu ngumphunga, kwaye ukufuma okuphezulu komoya kuthintela ukusasazeka kobushushu kwenkukhu, kwaye ubushushu bomzimba kulula ukuba buqokeleleke emzimbeni, kwaye bade benze ukwanda kobushushu bomzimba, okuchaphazela ukukhula kunye nokuveliswa kweqanda ngokukuko kwenkuku. Kukholelwa ngokubanzi ukuba i-40% -72% yindawo efanelekileyo yenkuku. Iqondo lobushushu eliphezulu lokubeka iinkukhu zehle ngokunyuka kokufuma. Idatha ekubhekiswa kuyo yile ilandelayo: iqondo lobushushu 28 ℃, RH 75% ubushushu 31 ℃, RH 50% ubushushu 33 ℃, RH 30%.
Singasebenzisa iqondo lobushushu kunye nokufuma ukufumana ubushushu kunye nokufuma kwedatha kwindlwana yenkukhu, xa ubushushu kunye nokufuma kuphezulu kakhulu okanye kusezantsi kakhulu, kulungele kuthi ukuba sithathe amanyathelo afike ngexesha, njengokuvula ifeni yokukhupha umoya Ukupholisa okanye ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ukugcina ukufudumala. Iimveliso zoluhlu lwe-Hengko HENGKO® zeemveliso zoluhlu lobushushu kunye nokufuma zilungiselelwe ngokukodwa ukujonga ubushushu kunye nokufuma kwindawo ezibi. Izicelo eziqhelekileyo zibandakanya indawo ezinzileyo ngaphakathi, ukufudumeza, umoya opholisa umoya (i-HVAC), ifama yemfuyo, indlu eluhlaza, iiphuli zokudada zangaphakathi, kunye nokusetyenziswa kwangaphandle. Uvavanyo lwezindlu lwenzwa, ukungena komoya okuhle, ukuhamba ngokukhawuleza kwegesi kunye nokufuma, isantya sokutshintshiselana ngokukhawuleza. Indlu ithintela amanzi ukuba angene emzimbeni woluvo kwaye onakalise inzwa, kodwa ivumela umoya ukuba udlule ngenjongo yokulinganisa ukufuma okuphakathi (ukufuma). Uluhlu lobungakanani bepore: 0.2um-120um, filter dustproof, isiphumo esihle sokuthintela, ukusebenza kakuhle kokucoca. Ubungakanani bepore, ukuhamba kokuhamba kunokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno; uzinzo, ubumbano lwesuntswana ukubopha, akukho mfuduko, phantse ayinakwahlulwa phantsi kwimo engqongileyo.
I-51-3, iFu 'indlela eseNtshona, iSitalato iPinghu, iSithili saseLonggang, eShenzhen
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
© Copyright - 2001-3030: HENGKO.com Onke amalungelo agciniwe. Hot Products - eKhaya - AMP Mobile
misindo Metal , Stainless lokucoca ulwelo, Ukufuma woluvo , Isihluzi Sintered , Gas detector Housing , Ebanzi